कांग्रेसले आरजु राणालार्इ किँन सुटुक्क दिल्ली पठायाे ? - Everest Dainik - News from Nepal
कांग्रेसले आरजु राणालार्इ किँन सुटुक्क दिल्ली पठायाे ?
काठमाडौं, पुस ३ । वाम गठबन्धनका अगाडी कांग्रेसका उम्मेदवार निरीह हुने अनुमानबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी शक्तिशाली पत्नी आरजु राणा देउवाले जित्ने विश्वास ब्यक्त गरेकी थिईन् ।
आफ्नो जितमा पुर्णरुपमा विश्वस्त देखिएकी उनले आफुलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै मत मागे पनि उनको भागमा अन्नतः उही पराजय नै पर्यो ।
चुनावी हारपछि विछिप्तप्रायः बनेकी तिनै आरजु धनगढी, महेन्द्रनगर र बनबास हुँदै सुटुक्क भारतको नयाँ दिल्ली पुगेर फर्केको खबर छ । स्रोतका अनुसार, ०७४ मंसिर २३ गते आरजु धनगढीबाट वनवासा हुँदै नयाँ दिल्ली पुगेकी हुन् ।
एमालेका नारदमुनि रानासंग फराकिलो मतान्तरमा पराजित भएकी आरजु हारको पीडा सहन नसकेर हो या अरु कुनै कारणले त्यता पुगिन ? साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु चढेको गाडीलाई ठक्कर दिएर जीप फरार